ကံကောင်းသူများ ဖြစ်ကြဖို့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ကံကောင်းသူများ ဖြစ်ကြဖို့
Posted by manawphyulay on Aug 29, 2010 in Creative Writing, Drama, Essays.. |5comments
“ဟုတ်ပါတယ် ဖေဖေ။ သမီး ဒါကို ယုံကြည်ပါတယ်။ ဘယ်အလုပ်ပဲလုပ်လုပ် ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ်ကျေအောင် လုပ်မယ်။ ပြီးတော့ အောင်မြင်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုလည်း သမီးရင်ထဲမှာ စွဲစွဲမြဲမြဲထားပါတယ်။ နောက်ပြီး စိတ်ထားကောင်းရင် ကံကောင်းမှာပဲဆိုတာ သမီး လက်ခံထားမိတယ်။ ဘယ်သူတွေ ဘယ်လောက် ကောင်းကောင်း မကောင်းကောင်း သမီးဘက်က သည်းခံသင့်တဲ့အတိုင်းအတာထိ တတ်နိုင်သရွေ့ သမီး ကောင်းအောင် နေသွားမှာပါ။ ဘုန်းဘုန်းအရှင်ရာဟုလာက cbox ထဲမှာ လာရေးသွားတယ်ဖေဖေ အရမ်းကြီး သည်းခံနေရင်လည်း လူတုံးလူအ ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်တဲ့။ သြော် ဒါနဲ့ ပါရမီဆိုတာကရော….”
၁။ ဒါနပါရမီ – စွန့်လွှတ်ခြင်း
၂။ သီလပါရမီ – ကိုယ်ကျင့်ကောင်းခြင်း
၃။ နေက္ခမ္မပါရမီ – တပ်မက်မှုကင်းခြင်း
၄။ ပညာပါရမီ – အမှန်အတိုင်းသိမြင်ခြင်း
၅။ ၀ီရိယပါရမီ – ဇွဲလုံ့လရှိခြင်း
၆။ ခန္တီပါရမီ – သည်းခံခြင်း
၇။ သစ္စာပါရမီ – မှန်ကန်ခြင်း
၈။ အဓိဋ္ဌာန်ပါရမီ – ခိုင်မာသော ဆုံးဖြတ်ချက်ထားရှိခြင်း
၉။ မေတ္တာပါရမီ – မေတ္တာစိတ်ထားရှိခြင်း
၁၀။ ဥပေက္ခာပါရမီ – လျစ်လျူရှုထားခြင်း ဆိုတဲ့ ပါရမီ ၁၀ ပါးရှိတယ်လေ။
၆။ ခန္တီပါရမီ – သည်းခံခြင်း ဆိုတာတော်တော်လေးကို ခက်ခဲတဲ့အလုပ်ပဲ Gong Zhu အတွက်တော့ . . .
အော် ..ပါရမီ …..ပါရမီ……
ကျင့်ကြံခြင်းအမှုကိစ္စတွေတိုင်းမှာ ဖြည်းဖြည်းညင်သာ ကြာကြာစခန်းသွားရတာမလို့ .. .
ကျွန်တော်တို့ ရွှေမြို့တော်ကြီးက ပါရမီဘတ်စ်တွေလည်း ကြာသလားမှ မသိတာနော်..မမနော…
ပါရမီကားတော့မသိဘူး။ အဓိပတိကားတော့ အိပ်ရေး ၃ လေးရေး ရတာတောင် ကားမထွက်လို့ ကားသမားနဲ့ အမြဲစကားများရတယ်။ မစီးလို့လည်းမဖြစ်ဘူးလေ။
လုပ်နေတာကို ကြည့်လိုက်တော့ အများဆုံး ပါရမီက ခန္တီပါရမီ ပဲ
ကျေးကျေး မမနော အဲ … မမ မနော လို့ ပြောမှ ဖြစ်မယ် …
သည်းခံတယ်ဆိုတာတရားနဲ့ ညီမှ သည်းခံမှာပါ
ဒါကလည်း လေ့ကျင့်ယူမှ ဆရာမလေးပြောသလို
အောင်မြင်ချင်လို့ သည်းခံတယ် မဟုတ်ပေဘူးလောကီကိ
တခါက အိမ်တက်မင်္ဂလာပွဲမှာ ဆရာတော်တပါးက တရားဟောပါလေတယ်
လူ၎ယောက်လိုက်သွားတယ် ဘုန်းဘုန်း ဟောကြားတဲ့ တရားလေး ….ဘုန်းကြီးက
ခန္တီပါရမီပါကွာလို့ပြောတယ် နောက်တယောက် တက်လာပြီး ဘုန်းဘုန်း ဟို အိမ်တက်
မှာဟောတာ ဘာတရားး ဘုန်းကြီးက သည်းခံခြင်းသာ….ပြောတာပေါ့ အဲ့ဒီ လူဆင်း
သွားတော့ နောက်တယောက်တက်လာတယ် ဆရာတော်ဘုရား ဟောတဲ့ တရားလေး
ခေါင်းစဉ်က ဘုန်းကြီးလည်းပြောတာပေါ့ ဒီလူဆင်းသွားတယ် နောက်တယောက်တက်
လာတယ။ မေးပြန်ေ၇ာ.. ဆရာတော်လည်းတရားခေါင်းစဉ်ပြောပြရှာပါတယ် ဒီလိုနဲ့
ပထမဆုံးမေးတဲ လူ ကျောင်းပေါ် ပြန်တက်လာတယ် အရှင်ဘုရား စောစောက ဟောတဲ့ တရားခေါင်းစဉ်လေး ဘာတဲ့…. ဘုန်းကြီးလည်း ကွမ်းအစ် ကို ကောက်လို့အဲ့ဒီ လူကို
အားကုန်ပေါက်ပြီး သည်းခံခြင်းသာ အောင်မြင်ရာ၏ ကွ ..သိပြီလား သိပြီလားဆိုပြီး
စောင့်ဖတ်ပါ့မယ် ကျွန်တော်ဆိုလိုတာက တရားနှင့်ညီမှသာ သည်းခံနိုင်မယ်
တရားနှင့်သာ……….. မနော ဖြူ လေး ငြိမ်းချမ်းအေးမြပါစေ အောင်မြင်ပါစေ…။